Pele oo dhulka ku jiiday xiddiga Real Madrid ee CR7, hadaba maxay ahayd wixii uu ku yiri Pele, Ronaldo? muxuuse ka yiri Qarankiisa Brazil | Laacibiin.net
Home » Wararka Maanta » Pele oo dhulka ku jiiday xiddiga Real Madrid ee CR7, hadaba maxay ahayd wixii uu ku yiri Pele, Ronaldo? muxuuse ka yiri Qarankiisa Brazil
Pele oo dhulka ku jiiday xiddiga Real Madrid ee CR7, hadaba maxay ahayd wixii uu ku yiri Pele, Ronaldo? muxuuse ka yiri Qarankiisa Brazil	Halyeygii hore ee qaranka Brazil Pele ayaa amaan kala dul dhacay, xiddiga Barcelona ee Neymar, isagoona sheegay inuu laacibka Barca iyo Brazil Neymar uu farsamo ahaan ka fiican yahay dhigiisa Real Madrid Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ayaa loo magacaabay Ballon d’Or, sanadii 2016 isagoona ku guuleystay markii afaraad waxaana uu sidoo kale la gudoonsiiyay abaalmarinta laacibka Ragga sannadka ee FIFA, ka gadaal markii uu ku guuleystay Champions League-ga iyo European Championship.
Inkastoo guulaha Ronaldo 12-kii bilood ee lasoo dhaafay ay ahaayeen iyo mustaqbalkiisa oo dhan, ay ahaayeen kuwa iska cad, Pele ayaa aaminsan in arintaas ay kaliya faa’iido badan u tahay Neymar.
“Dhibaatada kaliya ee Neymar ayaa ayaa ah cinwaanka,” ayuu Pele u sheegay UOL Esporte. “Cristiano Ronaldo ma ahan mid ka fiican isaga”.
“Farsamo ahaan, Neymar waa laacib aad u fiican, laakiin Ronaldo waa uu ka wanaagsan yahay, marka la isticmaalayo madaxa”.
Xiddiga heerka caalami ee qaranka Brazil, ayaa u saftay xulkiisa 91 kulan, waxa uuna dhaliyay 77 gool, inta u dhaxeysay sanadihii 1957 iyo 1971, isagoona hadda ku faraxsan inuu yahay macalinka cusub ee kooxda Tite.
Pele ayaa aaminsan in xulkiisa Selecao, uu hadda u ciyaarayo si wanaagsan, isagoona sheegay inay haatan ay joogaan ciyaaryahano xirfadle yaal ah, Brazil ayaana niyad jab weyn ka qaaday koobkii adduunka ee 2014-tii, kadib markii ay xasuuq ba’an kala kulmeen qaranka Germany, markaasoo goolal badan looga adkaaday.
“Brazil mar walba waxay leedahay ciyaartoy fiican, tan iyo wakhtigii Leonidas, Brazil mar walba waxaa u ciyaara ciyaaryahano waa weyn, laakiin waa maxay dhibaatada na heysata?, ayuu is weydiiyay, isagoona isla durbadiiba ku jawaabay, “ma heysano koox”. Pele ayaa kusoo koobay hadalkiisa.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/pele-oo-dhulka-ku-jiiday-xiddiga-real-madrid-ee-cr7-hadaba-maxay-ahayd-wixii-uu-ku-yiri-pele-ronaldo-muxuuse-ka-yiri-qarankiisa-brazil/">Pele oo dhulka ku jiiday xiddiga Real Madrid ee CR7, hadaba maxay ahayd wixii uu ku yiri Pele, Ronaldo? muxuuse ka yiri Qarankiisa Brazil</a>